Vonona ny hanao fety indray: mametraka varotra vaovao ny varotra Champagne
Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Vonona ny hanao fety indray: mametraka varotra vaovao ny varotra Champagne
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Vaovao farany Brezila • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Divay & Fanahy
Vonona ny hanao fety indray: mametraka varotra vaovao ny varotra Champagne.
Ny fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao amin'ny tsenan'ny champagne eran-tany dia mety hanosika ny varotra amin'ny tavoahangy 305 tapitrisa manerantany amin'ny 2021, tarehimarika hita farany tamin'ny taona 2017.
Ny sokajy Champagne dia nilatsaka efa ho 18 isan-jato tamin'ny taon-dasa taorian'ny fihenan'ny 2% tamin'ny 2019.
Miorina amin'ny fitomboana ankehitriny, ny varotra champagne dia andrasana hitombo eo amin'ny 4% amin'ity taona ity, ary hanohy ny fironana hatramin'ny 2025.
Nisondrotra 11.9% ny varotra Champagne teo anelanelan'ny Janoary sy Aogositra, raha oharina tamin'ny vanim-potoana talohan'ny areti-mifindra 2019.
Araka ny filazan'ny lovan'ireo mpamboly divay champagne frantsay SGV, Champagne Ny varotra dia handeha hahatratra efa-taona avo amin'ity taona ity, noho ny fanondranana any Etazonia sy Aostralia.
Mirongatra ny varotra miboiboika, miakatra amin'ny volabe farany hita talohan'ny areti-mifindra coronavirus eran-tany sy ny fanidiana hafa taorian'izay dia nampirongatra ny varotra, satria noraran'ny olona tsy hanao fety ny olona.
Champagne ny varotra teo anelanelan'ny volana Janoary sy Aogositra dia nitombo efa ho 12%, na dia ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny pre-pandemioma 2019 aza.
Tamin'izany fotoana izany, ny trano champagne frantsay dia nandefa tavoahangy 297.6 tapitrisa manerantany. Tamin’ny taona 2020 anefa dia tavoahangy 244 tapitrisa monja no nanondrana ny faritra, araka ny angom-baovao avy amin’ny fikambanana Comité Champagne. Ny famindram-pahefana ho an'ny sehatra, izay indostria fanondranana faharoa lehibe indrindra any Frantsa taorian'ny aeronautika, dia naneho fatiantoka tombony 980 tapitrisa dolara.
"Nidina saika 18% ny sokajy tamin'ny taon-dasa taorian'ny fihenan'ny 2% tamin'ny taona 2019," hoy ny mpandalina iray avy amin'ny International Wines and Spirits Record (IWSR) miorina any UK tamin'ny CNBC, tamin'ny fitanisana ny tarehimarika momba ny tsenan'ny zava-pisotro. Ankehitriny, mifototra amin'ny fiakarana ankehitriny, manantena ny orinasa Champagne ny varotra dia hitombo eo amin'ny 4% amin'ity taona ity ary hanohy ny fironana hatramin'ny 2025.
Mbola matoky kokoa aza ny vinavinan'ny Syndicate Général General of Champagne Winegrowers. Manantena ny vondrona fa ny famoriam-bahoaka amin'izao fotoana izao amin'ny tsenan'ny champagne eran-tany dia mety hanosika ny varotra amin'ny tavoahangy 305 tapitrisa manerantany amin'ny 2021, tarehimarika hita farany tamin'ny taona 2017.
Ny manam-pahaizana sasany dia mino fa vonona ny hanao fety indray ny olona rehefa avy nihidy nandritra ny herintaona.
"Raha tsy maintsy maminavina aho dia heveriko fa vonona ny hankalaza na dia ny zava-madinika eo amin'ny fiainana aza ny mpanjifa," hoy i Natalie Pavlatos, mpitondra tenin'ny Birao Champagne any Etazonia, tamin'ny CNBC. Raha mbola eo am-piomanana ny fialantsasatra dia nanamarika i Pavlatos fa ny birao misy azy dia efa mahazo tatitra momba ny varotra avo kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa.
"Noho izany dia mety tsy hahita fiverenana amin'ny ara-dalàna fotsiny isika fa fampisehoana tsara kokoa noho ny tamin'ny taona 2019," hoy i Pavlatos.